Fahalavoan' ny Olombelona - Wikipedia
Fahalavoan' ny Olombelona
Sary nataon' i Cornelis van Haarlem, 1592
Ny fahalavoan' ny olombelona, ​​ny fahalavoan' i Adama, na ny Fahalavoana tsotra izao, dia teny iray ampiasaina ao amin' ny fivavahana kristiana mba hilazana ny fiovan' ny lehilahy sy vehivavy voalohany avy amin' ny fankatoavana tsy manan-tsiny an' Andriamanitra ho amin' ny toetry ny tsy fankatoavana meloka. Ny fotopampianaran' ny Fahalavoana dia avy amin' ny fandikana ara-Baiboly ny Genesisy, toko 1-3. Tamin' ny voalohany dia niara-nipetraka tamin' Andriamanitra tao amin' ny saha Edena i Adama sy i Eva, saingy naka fanahy azy ireo ny menarana mba hihinana ny voan' ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, izay efa noraran' Andriamanitra. Rehefa avy nanao izany izy ireo dia nanjary menatra noho ny fitanjahany ary noroahin' Andriamanitra tao amin' ny saha izy ireo mba hisakanana azy tsy hihinana ny voan' ny hazon' aina ka ho lasa tsy mety maty.
Ao amin' ny kristianisma mahazatra (nikeana), ny fotopampianaran' ny Fahalavoana dia mifandray akaiky amin' ny fahotana tany am-boalohany (fahotana tamin' ny fototra) na ny fahotan' ny razana. Mino izy ireo fa ny Fahalavoana dia nitondra ota teto amin' izao tontolo izao, nanimba ny tontolo voajanahary iray manontolo, anisan' izany ny maha-olombelona, ​​ka nahatonga ny olombelona rehetra ho teraka tao amin' ny ota tany am-boalohany, toe-javatra izay tsy ahafahany mahazo ny fiainana mandrakizay raha tsy misy ny fahasoavan' Andriamanitra. Ny Eglizy Ôrtôdôksa Tatsinanana dia manaiky ny foto-kevitry ny Fahalavoana saingy mandà ny hevitra hoe ny heloky ny ota tany am-boalohany dia nifindra tamin' ny taranaka fara aman-dimby, miorina amin' ny ampahany amin' ny andalana ao amin' ny Ezekiela 18:20 izay milaza fa ny zanakalahy dia tsy meloka amin' ny fahotan' ny rainy. Mino ny Prôtestanta kalvinista fa nanolotra ny ainy ho sorona ho an' ny olom-boafidy i Jesosy, mba hanavotana azy ireo amin' ny fahotany. Ny lapsarianisma, ny fahatakarana ny filaharan' ny didin' Andriamanitra mifandraika amin' ny Fahalavoana, dia nozarain' ny Kalvinista sasany ho sopralapsariana (prelapsariana na antelapsariana, "talohan' ny Fahalavoana") sy infralapsariana (soblapsarian na pôstlapsariana, "taorian' ny Fahalavoana").
Ny fitantarana ny Saha Edena sy ny fahalavoan' ny olombelona dia lovam-pampianarana nozarain' ny fivavahana abrahamika rehetra, miaraka amin' ny fanehoana an' ohatra ny fitondran-tena sy ny finoana ara-pivavahana jodeô-kristiana, izay nisy fiantraikany goavana teo amin' ny fiheverana momba ny firaisana ara-nofo, ny andraikitry ny lahy sy ny vavy ary ny fahasamihafan' ny lahy sy ny vavy eo amin' ny sivilizasiôna tandrefana sy sivilizasiôna silamo. Tsy toy ny kristianisma ireo fivavahana abrahamika lehibe hafa, ny jodaisma sy ny silamo, izay tsy manana foto-kevitra momba ny "fahotana tamin' ny fototra", fa kosa namolavola fandikana hafa samihafa momba ny fitantarana an' i Edena.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fahalavoan%27_ny_Olombelona&oldid=1043652"
Voaova farany tamin'ny 8 Febroary 2022 amin'ny 11:31 ity pejy ity.